Waa maxay, sidee iyo goorma ayay neecawda badda abuurtaa | Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii waligaa waxaad dareentay neecawda badaha ee maqaarkaaga waxaadna iswaydiisay sida ay u samaysan tahay iyo sababta ay u tahay. Dhulka iyo biyuhuba si joogto ah ayey u kululaanayaan oo u qaboojinayaan marka loo eego kala duwanaanshaha heerkulka ee dhaca inta u dhexeysa habeen iyo maalin. Marka hawada dusha sare ay kululaato xitaa in ka badan inta caadiga ah inta lagu jiro maalinta, hawada sare ee hawada ayaa sameysma, iyagoo sameeya neecawda badda.
Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato neecawda badda?
1 Sidee loo sameeyaa?
2 Goorma ayey sameysmaan?
3 Astaamaha dabaysha bada
4 Jasiirado iyo dayax-gacmeedyo
Neefta badda waxaa loo yaqaan virazón. Kala duwanaanshaha heerkulka u dhexeeya maalin iyo habeen dartiis, dusha sare waa la kululeeyaa oo la qaboojiyaa si wareeg ah. Tani waxay keentaa dusha sare ee Dhulka, markay kululaato wax ka badan inta caadiga ah waxayna sameysaa kahor badda dusheeda, Abuur qulqulo hawo kulul, oo kordhaysa.
Markay hawada kulul kacdo, maadaama ay ka diirran tahay badda dusheeda, waxay ka tagtaa farqiga cadaadiska hooseeya. Hawada ayaa sare usii kacaysa marba marka ka dambeysa markay kululaato iyo hawo qabow oo u dhow dusha badda waxay ka tagaysaa meel cadaadis sare leh, taas oo ka dhigaysa rabto inaad qabsato booska hawadu ka baxday. Sababtaas awgeed, cufnaanta hawada ee leh cadaadiska ugu sarreeya ee badda waxay u egtahay inay ka gudubto aagga cadaadiska hoose ee ku dhow dhulka.
Tani waxay keentaa in hawada dusha sare ee badda ay soo gasho xeebta oo ay qabow ahaato inta badan way ka raaxo badan tahay xagaaga, laakiin waa qabow xilliga qaboobaha.
Goorma ayey sameysmaan?
Neecawda badda ayaa sameysanta waqti kasta. Waxaa kaliya lagama maarmaan u ah qorraxda inay kuleylka dusha sare gaarsiiso heer kul ka sarreeya hawo ku xeeran dusha sare ee badda. Maalmaha leh dabayl yar guud ahaan, waxaa jiri kara neecaw badan oo badda ah, maadaama dhulka dushiisu kululaato.
Neecawda ugu macaan ee la dareemo ayaa la sameeyaa xilliga gu'ga iyo xagaaga iyadoo ay ugu wacan tahay qorraxda oo aad u kulushahay dusha sare ee dhulka isla markaana ay biyuhu weli qabow yihiin xilliga qaboobaha. Ilaa heerkulka badda uu kordho sababtoo ah saameynta la qabsashada, dabeylaha badda ayaa sii socon doona.
Xoogga dabaysha ee ka dhalata neecawda badda waxay kuxirantahay kala duwanaanta heerkulka. Farqiga u dhexeeya heerkulka labada dusha sare, xawaaraha sare ee dabaysha, Maaddaama ay jiraan hawo badan oo doonaya inay beddelaan farqiga u dhexeeya culeyska yar ee ka haray kor u kaca hawada kulul.
Astaamaha dabaysha bada
Neecawda badda waxay u egtahay inay ku toosan tahay dhinaca xeebta oo wey awoodaa inay gaarto 20 mayl xagga badda. Maaddaama loo baahan yahay kala duwanaansho heerkul adag oo u dhexeeya dhulka iyo badda dusheeda, awoodda ugu badan ee neecawda badda waxaa la helaa wixii ka dambeeya duhurkii, marka qorraxdu kulushahay si xoog leh. Xawaaraha dabayshu sidoo kale waxay kuxirantahay oraahda dhulka. In kasta oo ay guud ahaan yihiin dabaylo fudud oo wacan, haddii ereraafku ka hooseeyo, dabayshu waxay gaadhi kartaa ilaa 25 gunti.
Mararka qaarkood, qulqulka qulqulaya ee ka sarreeya heerkulka dhulka iyo huurka adag ee ay hareeraha ka keeneen hawada hareeraheeda, wuxuu sameeyaa daruuro si toos ah u koraya (oo loo yaqaan cumulonimbus) oo keeni kara xaalado xasillooni darro jawiga iyo duufaanno koronto oo xoog leh ayaa ku dhici kara roob aad u weyn muddo gaaban gudaheed. Tani waa asalka qaar ka mid ah duufaannadii xagaaga ee caanka ahaa: kuwa kaliya 20 daqiiqo gudahood, kaga tagaya biyo xireen sababi kara dhaawac culus
Jasiirado iyo dayax-gacmeedyo
Jasiiradaha sidoo kale waxaa jira saameynta dabaysha badda ee xeebta oo dhan. Sidoo kale waxay badanaa sarreeyaan wixii ka dambeeya duhurkii. Tan macnaheedu waxa weeye in dhammaan meelaha ugu habboon ee doonnida lagu xidho ay yihiin kuwo dabaylo wata oo way adag tahay in la helo mid ka mid ah halka ay neecowdu baddu ma afuufayso ama ay daciif tahay.
Saameyn la mid ah tan oo keenta neecawda badda, qaar ka mid ah monsoons ayaa la sameeyaa. Saameyntan shaqo ee hawada qabow ee aagga cadaadiska hoose ee ay ka tagtay hawada diiran ee kor u kacaysa, ayaa ku sii kordhay baaxad weyn, waxay ka dhigeysaa dabeylaha kuwo xoog badan oo sameysmaya daruuro aad u cufan oo khatar badan. Daruurahaasi waxay daayaan roobab badan sida ay yihiin monsoons meelaha ku dhow Himalayas.
Xilliga xagaaga, cufnaanta hawadu ee Koonfur-bari Aasiya way kululaanaysaa oo kor ayey u kacaysaa, taasoo ka tagaysa aag cadaadiskiisu hooseeyo oogada dhulka. Aaggan waxaa lagu beddelay hawo qabow oo ka timaadda dusha sare ee badda oo ka imanaysa qabow Badweynta Hindiya. Markay hawadani la soo xidhiidho aagga diirran, waxay gaadhaa aagga buurta dheer oo ay ka bilaabataa fuuladeeda illaa ay ka gaarto meelaha ka sarreeya oo ay qabowdo, taas oo keenta roob aad u culus.
Waxaan ugu magac darnay 'terral' maxaa yeelay waxay la xiriirtaa neecawda badda, in kasta oo xaaladdeeda iyo saamaynteedu gebi ahaanba ka soo horjeeddo. Inta lagu jiro habeenkii, dusha sare ee dhulka ayaa qaboobaya maaddaama qorraxdu aysan wax saameyn ah yeelan. Si kastaba ha noqotee, dusha sare ee badda ayaa sifiican u ilaaliya kuleylka la nuugo maalinta oo dhan saacadaha iftiinka qoraxda. Xaaladdaani waxay keenaysaa in dabayshu u dhacdo dhinaca ka soo horjeedka, taas oo ah, dhulka ilaa badda. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah heerkulka hawada ee u dhow dusha sare ee badda ayaa ka sarreeya tan dusha sare ee dhulka waxayna soo saartaa aag leh cadaadis hoose ee jawiga. Sidaa darteed, hawada ugu qabow dhulka dushiisa oo dhan waxay dooneysaa inay daboosho aaggaas cadaadiska hooseeya waxayna soo saartaa neecaw badeed jihada badda-berriga.
Marka hawada ugu qabow ee dhulka la kulanto hawada ka kulushahay dusha sare ee badda, way samaysantaa waxa loo yaqaan terral. Dabayl kulul oo dhanka badda u socota.
Macluumaadkan, waxaa hubaal ah inay si cad u noqotay sababta neecowda badda u dhacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Neefta bada
Ecuador waxay lumisay 54% barafkeeda ilaa 1980